Dhageyso: Axmed Diiriye oo weerar ku qaaday xildhibaanada Soomaaliya |
Dhageyso: Axmed Diiriye oo weerar ku qaaday xildhibaanada Soomaaliya
Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ka mid ah Odayaasha Golaha Dhaqanka Somaliyeed, ayaa wuxuu si adag uu kaga hadlay mushkilada ka dhex aloosan Hay’adaha Dowladda Federalka Somaliya, oo la rumeysan yahay inaanay wada shaqayn buuxdo ka dhaxeen.
Nabadoon Axmed Diiriye, ayaa sheegaaya in ay iswareysteen Odayaasha Dhaqanka Somaliyeed, haddii ay yihiin, ayna ku talla bixiyeen inaan dib u dhac lagu keenin dalka, isla-markaana aan dabeecadaha Baarlamaanka Somaliya laga dhigin qodax ku taagan shacbiga Soomaaliyeed.
Waxa kaloo uu sheegayaa in loo baahan yahay in laga gudbo khilaafka ku kala dhex jira Hay’adaha Dowladda, in leesku samro, halmeelna looga soo wada jeesto waxyaabaha leesku haayo.
Sidoo kale wuxuu ku baaqayaa in Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ay taageeraan Golaha Wasiirada, ee lagu wado in maalmaha soo socdo uu soo magacaabo Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, haddii kalana Xildhibaanada loo arki doono caqabad loo soo diray dalka, sida uu yiri.
Axmed Diiriye, ayaa Xildhibaanada qaarkood ku eedeeyay in ay Baarlamaanka ku soo jireen tan iyo Dowladdii Carta lagu soo dhisay, mudadaasina ay ka shaqeynayeen caqabado uu sheegay inaanay weli harin.
Dhanka kale Nabadoon Diiriye, ayaa Madaxweynaha Dowladda Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud kula taliyay, in uu sameeyo la tashi wanaagsan oo dhinaca Golaha Wasiirada ah, isagoo dadka qancinaaya, una muujinaaya daacad iyo walaaltinimo. Si uu u kasbado kalsoonida shacabka.
Waxa uu carabka ku adkeeyay inaan xukun adag iyo canaan waxba lagu gaari karin, oo waxa meel lagu gaari karaa ay tahay daacadnimo iyo kasbashada kalsoonida ummadiisa.
Hadalka Nabadoonka waxa uu ku soo aadayaa, xilli inta badan Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ay saluugsan yihiin Dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Axmed Diiriye, ayaa hadalkaan ka sheegay wareysi uu siiyay Idaacada Goobjoog ee Magaalada Muqdisho.